Hevitra MPANOHARIANA | Desambra 2010
Wikileaks momba ny FPVM Antaninanandrano
2010-12-22 @ 23:19 in Finoana
Tsy re na hitan'ny olona tsy manana aterineto ny zavatra malaza aty amin'ny aterineto amin'izao fotoana izao. Nisalasala ihany vao tapa-kevitra ny hanoratra. Isika mpiserasera ihany aloha no maharaka ny fisian'ilay lahatsary izay notapatapahina sy mikorontana ny filaharany ka tsy fantatra intsony izay lohany ary tsy hita tsara izay farany. Fahadisoana voalohany nataon'izay namoaka ny lahatsary telo mifampitohy toy ny manao endrika mitohivakana na miverimberina ilay izy. Avy amin'izay tsy nandaharana araka izay fandehan'ny tantara izay no tsy dia ahafahana loatra mitsara haingana sy befahatany. Toa samy ahitana ny sombin'ny fizarana voalohany sy faharoa ary fahatelo mifangaro avokoa ireo lahatsary telo lazaina ho mifampitohy: manana ny rariny ihany noho izany izay miteny fa namboarina ilay lahatsary na dia mety ho zava-misy tao amin'ny FPVM Antaninanandrano tokoa aza ny sehatra.
Manaraka izany, tsy fantatra tsara ny mahazo ireo "mpandray anjara fototra" nefa izy telo ireo no toy ny nasongadina tao amin'ilay lahatsary [video]. Ny iray tamin'ny mpaka sary moa dia niteny hoe "tsy tenenina intsony hoe tsy mety!" nandritra ny fotoana nibaikobakoan'i Rija ireo roa vavy nampijaliana sy nampanaovina zavatra tsy mifanaraka amin'ny maha-olombelona. Andeha atao hoe samy tsy ao anatin'ny fahasalamany loatra ilay mpibaikobaiko, tsy fantatra mazava raha izay ny ritoaly tsy maintsy notanterahina hanalana ny rofy sy ny aretina sy ny devoly na bibilava manjaka ao anatin'ilay marary [na nalàna fahalemena sy fahajambana mbamin'ny tsy fandrenesana]. Tsy nifanaraka loatra amin'izay heverina ho fampianarana momba ny finoana kristiana sy momba ny "Fifohazana" koa anefa ny zava-natao.
Amin'ny fandroahana ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra dia alefa any amin'ny farihy mirehitra afo sy solifara ireo zavatra telo ireo, na ilay antsoina ao amin'ny Apokalypsy ihany koa hoe fahafatesana faharoa fa tsy averina velively any amin'ilay lazaina fa nanao azy [ny famosaviana, ambalavelona,sns...]. Tsy ny olona na oviana na oviana no tokony enjehina sy ampijaliana fa ny devoly mpamitaka izao tontolo izao. Averiko indray fa tsy azoko atao ny mitsaratsara fahatany, ao amin'ny lahatsary aloha dia tsy nanitsy ny teny tsy mety hoe "avereno aminay izay nanao azy" izay mety ho mpiandry tao nefa noho ny fanapatapahana ny lahatsary dia azo atao ihany koa ny manahy hoe sao dia natao hanalana baraka fotsiny ny tantara naseho nefa tsy araka izay filaharany tokoa.
Etsy ankilany indray raha ny fandehan'ny famotorana natao dia tsy fantatra mazava na "nitolo-batana" ireo olona ireo na "azo teo ampanaovan-dratsy"... toa tsy nandositra intsony anefa ry zareo. Tsipalotra tamin'ny alalan'ny resaka fa karazan'ny andro faharoa nanaovana ny famotorana ny nakana ny sary. Miteny hoe nakana ny sary moa dia tsy tokony ho nalaina sary velively ihany koa ny toe-javatra sahala amin'ireny. Betsaka ny olona mety tsy hahazaka ny fanalana ny devoly fotsiny na dia tsy nisy aza ireny fampijaliana ara-batana sy ara-tsaina nahazo ireo olona roa ireo. Asa na manao ahoana na manao ahoana ny tena fandehan'ny raharaha fa toa karazana valifaty no tena natao na naseho ho hitantsika mpiserasera fa tsy fanavotana fanahin'olona velively.
Farany, raha tsy misy azonao izay rehetra nolazaiko dia "soa ihany" izany satria aleo izay nahita ihany no hahazo tsara izay voasoratro, tsy nikendry ny hanazava loatra aho fa ny hilaza ny hevitro fotsiny ihany ho an'izay nahita tahaka ahy. Ho an'izay nametraka ny lahatsary dia miangavy azy ireo hamerina araka ny fandehan'ny tantara ny zavanisy tamin'io fotoana io hahafahana tena mamakafaka azy fa tsy hanaitaitra fotsiny ny olona. Ary ny fehiny ataoko dia hoe "Raha hoy isika: tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia Mahatoky sy Marina Andriamanitra [Izy] ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-fahamarinana rehetra." I Jaona 01: 08-09
Jentilisa 23 desambra 2010 amin'ny 01:18